အိတ်ဆောင်နွေမွေ့ရာ Pros နှင့် Cons
မွေ့ယာများအကြားတွင်, နူးညံ့သောမွေ့ယာများမှာပိုလျှံသည် 3500 စမ်းရေ. သာမာန်အားဖြင့်ပိုမိုအားကောင်းသောအရိုးအထူးကုမွေ့ရာများတွင်စမ်းရေများကိုတွေ့ရလေ့ရှိသည်. အိတ်ဆောင်နွေ ဦး မွေ့ရာတီထွင်မှုသည်အိတ်ဆောင်နွေ ဦး မွေ့ရာများဖန်တီးရန်လှုံ့ဆော်ပေးသောကြောင့်အတော်လေးလူသိများသည်. ဒီမွေ့ရာတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်, တစ် ဦး ချင်းစမ်းရေအားဖြင့်ထူးခြားသောနှစ်သိမ့်မှုပေးပါ. ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝပုံစံကိုလိုက်နာကတည်းက, ဒါဟာအကောင်းဆုံးစံပြအရိုးအထူးကုဆရာဝန်ဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်ထားသည်. ကောင်းမွန်သောအိပ်စက်ခြင်းအတွက်, သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အခြေအနေနှင့်ကိုက်ညီသောမွေ့ရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်. အိတ်ဆောင်နွေ ဦး မွေ့ရာသည်ယနေ့ခေတ်တွင်လက်ခံနိုင်သောအသိအမှတ်ပြုမှုကိုတိုးပွားစေသည်. သမားရိုးကျမွေ့ယာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်သောအခါ၎င်းတို့သည်အကောင်းအဆိုးများစွာကိုပေးသည်, မလွှဲမရှောင် cons, တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ. အိတ်ဆောင်နွေ ဦး အဖုံး၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများကိုကြည့်ပါ.
Pocket spring covers contain hundreds and thousands of springs that are encased in individual delicate texture pockets underneath the layers of luxurious fillings. ဤမွေ့ရာသည်ဖိအားမှန်ကန်သောဖိအားဖြင့်လွတ်လပ်စွာအလုပ်လုပ်သည်ဟူသောအချက်ကြောင့်အလွန်လူကြိုက်များသည်. မည်သို့ပင်ဖြစ်စေလူနှစ် ဦး သည်အလားတူကုတင်တစ်မျိုးတည်းရှိမရှိ, ဒီအိပ်ယာလွတ်လပ်စွာသူတို့အသီးအသီးအားဖြည့်ပါလိမ့်မယ်, သူတို့ကိုသင့်လျော်သောအကူအညီပေးခြင်း. ဦး ခေါင်းမှခြေချောင်းသို့စတင်ခြင်း, အိတ်ဆောင်နွေ ဦး အိပ်ပျော်နေတဲ့ခေါင်မိုးနှင့်အတူသင်တစ် ဦး နက်ရှိုင်းသောအကူအညီဒီဂရီကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်. နောက်ထပ် ဦး စားပေးအနေအထားတစ်ခုမှာမွေ့ရာ၏သက်ရောက်မှုကိုဖယ်ရှားပေးသကဲ့သို့၎င်းသည်အတူတကွလှိမ့်မှုကိုလျှော့ချခြင်းဖြစ်သည်. ကိုယ်အလေးချိန်ပိုမိုဆန့်ကျင်မှုရှိသူများသည်သင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ပုံသဏ္indicatedာန်အတိုင်းညွှန်ပြသည့်အတိုင်းပြောင်းလဲနိုင်သည်, ဤအချက်များကြောင့်သင့်ကိုများစွာအကူအညီပေးသည်. မွေ့ယာများနှင့်ဆိုဖာများထားရှိရန်လိုအပ်သည်. ရေတပ်အပြာထောင့်ဆိုဖာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးဆိုဖာတစ်ခုဖြစ်သည်.
There are various kinds of strains accessible for the springs. သူတို့ထဲကတချို့ကနူးညံ့သိမ်မွေ့သောပါဝင်သည်, အလယ်အလတ်, နှင့်ခိုင်မြဲသော. သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကမည်သို့တုံ့ပြန်မည်ဆိုသည့်အပေါ် မူတည်၍ သင်လိုအပ်သည့်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်နိုင်သည်. Stress no more with spinal pains when you can rest calmly overapocket spring mattress. With regard to getting them, you can be calm and don't stress over the expense. Pocket spring sleeping cushions are enduring, tough, and financially savvy. Its strength clears the path for dependable impacts; along these lines, you can utilize it foralong time.
Generally, pocket spring mattress presents too soft or too hard, which is not healthy for children since they are experiencing the teenager stage. The quality of the mattress will directly affect the child's spinal development. အပြင်, the spring mattress is easy to sink but hard to get up, which is rather damaged to elders with loose bones. We recommend they'd better to chooseamattress withahigher hardness.
The underlying layers of the mattress could have been made of wool and fiber, hence providingaconducive environment for allergens like dust mites to grow and flourish. ထို့ပြင်, in order to fix the inner cushion material interlayer, much glue is used. The splin up to three layers, အရမ်း, it not only storage dust but not easy to clean. This is also why cleaningaspring mattress more often is very important.